မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး - ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ SMS & QR ကုဒ်များ - ဇိမ်ခံကားလိုပါသလားသို့မဟုတ်လိုအပ်ပါသလား။
2015 သည်အားဖြင့် မိုဘိုင်းအင်တာနက်သည် desktop အသုံးပြုမှုကိုမှီလိမ့်မည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဆသိရသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများသည် ၀ ယ်ယူမှုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ကိုအသုံးပြုနေကြသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအတွက်မိုဘိုင်းဗျူဟာမရှိခြင်းနှင့်အသုံးမပြုခြင်းအားဖြင့်အွန်လိုင်းအခွင့်အလမ်းများ၏ ၅၀% အထိလွဲချော်နိုင်သည်။ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဒီရာခိုင်နှုန်းဟာဆက်လက်မြင့်တက်နေ ဦး မှာပါ။ မေးခွန်းမှာ - သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုမိုဘိုင်းဝက်ဘ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားသလား၊
အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် ဂျွန် McTigue (EVP) နှင့် ချတ်ပိုလတ် (Social Media & Search Marketing ၏ဒါရိုက်တာ) Kuno Creative မှ“ Mobile Inbound Marketing” ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါတင်ဆက်မှုတွင်အဓိကမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနယ်ပယ်လေးခုနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်
၁။ Mobile Websites
တုန့်ပြန်သော ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းနှင့် mobile site ကိုသီးခြားခွဲထုတ်ပါ
၃။ SMS / စာတိုပေးပို့စနစ်
စာရင်းအင်း & လူ ဦး ရေစာရင်း
SMS မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလမ်းလျှောက် - မှတဆင့်
4. QR ကုဒ်များ
ထို့အပြင်တင်ဆက်မှုသည်မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများအားအားကောင်းစေပြီးလက်ရှိအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများသို့မိုဘိုင်းဖုန်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူပေါင်းစည်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်နည်းပညာနှင့်ကိရိယာများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးထားတဲ့ကိရိယာအချို့လည်းပါဝင်တယ် 44 တံခါးဖြင့်ဖမ်းယူ, MoFuse နှင့် HubSpot.
မိုဘိုင်းအဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စျေးကွက်သမားများအတွက်စဉ်းစားစရာမဟုတ်တော့ပါ။ ကိန်းဂဏန်းများ၊ အသုံးပြုမှုနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏လူ ဦး ရေစာရင်းကိုရောက်ရှိလိုသောဆန္ဒရှိရန်လိုအပ်သည်။ မရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သူများသည်မိုဘိုင်းတွင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ရန်ရွေးချယ်သောသူတို့၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ယှဉ်လျှင်အားနည်းနေသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ၏ဗီဒီယိုပြည့်စုံကြည့်ရှုရန်အခမဲ့ခံစားရသည် မိုဘိုင်းအဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတင်ဆက်မှု.
Tags: မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်စျေးကွက်မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းQR ကုဒ်များစာတို